पोर्चुगल हिँडेका ३ नेपालीलाई कोरोनाको लक्षण देखियो ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/पोर्चुगल हिँडेका ३ नेपालीलाई कोरोनाको लक्षण देखियो !
पोर्चुगल हिँडेका ३ नेपालीलाई कोरोनाको लक्षण देखियो !
एजेन्सी । चीनवाट सुरुभएको कोरोना भाइरसले अहिले विश्वका ९० मुलुकमा प्रभाव देखाइसकेको छ । विदेशी आवागमन प्रभावित भएको छ । सबै मुलुकले विदेशवाट भित्रने विदेशी पर्यटकलाई कडाई गरेका छन् । अन्तराष्ट्रिय उडान प्रभावित भएका कारण ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।
जोखिम मोलेर विदेश यात्रा गरेकाहरु पनि समस्यामा पर्ने गरेका छन् । नेपालवाट वैदेशिक रोजगारीका लागि पोर्चुगल हिँडेका ३ नेपालीलाई कोरोनाको लक्षण देखिएपछि फ्रान्समा रोकिएको छ । ज्वरो आउने र अन्य लक्षण देखिएपछि फ्रान्समा रोकेर स्वास्थ्य परिक्षण गरिएको छ ।
चीनबाट उत्पन्न भएको कोरोना भाइरस दक्षिण कोरियामा थप ५१८ जना नयाँ संक्रमित फेला परेको छ । अहिले चीनमा भन्दा दक्षिण कोरिया र इरानमा प्रभावितहरुको संख्या बढेको छ । अहिले दक्षिण कोरियामा कूल संक्रमितको सङ्ख्या ६ हजार २८४ जना पुगेको छ भने ४३ जनाको निधन भइसकेको छ ।
कोरोनाको लक्ष्यण देखेपछि परिक्षण गरिएका तीनजना नेपालीको अवस्था अहिले सामान्य रहेको बताइएको छ । कोरियामा रहेका पर्वतका राधाकृष्ण सुवेदीले उनीहरुको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका हुन् । उनीहरुलाई बाहिर निस्कन दिइएको छैन ।
हालसम्म कोरियामा ४२ हजार नेपाली छन् । कोरियामा रहेका नेपालीहरुले आफुहरु सुरक्षित रहेको भन्दै नेपालमा रहेका आफन्तलाई नआत्तिन आग्रह गरेका छन् । कोरियामा अहिले कोरोना नियन्त्रणको क्रममा रहेकाले आफुहरु सुरक्षित नै रहने नेपालीहरुले बताएका छन् ।
बुवाको मृ’त्युपछि आमा हरेक रात अर्कै केटासंग मख्ख, छोरी रुँ’दै आईन् मिडियामा (हेर्नुस् भिडियो)